Kom igång med lekar - Soomaali
Cayaartu waa habka dabiiciga ah ee carruurta yaryar u bartaan waxyaabo cusub. Waa la ciyaarida kuwa kale inay carruurtu bartaan wada xiriirka, kobciyaan maskaxdooda iyo xallinta dhibaatooyinka. Carruurta maanta waqti aad u badan ayey ku qaadanayaan shaashadaha kala duwan hortooda. Tani waxay ka dhigan tahay inay heystaan fursado yar oo ay ku ciyaaraan marka loo eego sida ay dhab ahaan ugu baahan yihiin. Sidaas darteed Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu soo saaray tilmaamo ah in carruurta ka yar laba sano aysan waqti ku qaadan shaashadaha hortooda. Qof weyn ahaan, waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn kartid si aad uga caawiso carruurta inay bilaabaan ciyaarta iyo isdhexgalka da'da yar.
Sideen ku caawin karaa ilmahayga?
Maaddaama carruurta yaryar ay badanaa ku adag tahay inay la yimaadaan oo ay horumariyaan ciyaaro kaligood ah, dadka waaweyn mararka qaarkood waa inay ka caawiyaan arrintan. Adiga oo qaangaar ah, waxaad qorsheyn kartaa saacad ciyaar ah maalin kasta, oo aad adiga iyo ilmahaagu ku ciyaari doontaan kuna wada baashaali doontaan. Waxaad sidoo kale ku casuumi kartaa naftaada inaad ku soo biirto wax kasta oo canugaaga ciyaarayo daqiiqadda ku habboon. Ka dib waxaad ka caawin kartaa horumarinta ciyaarta ilmaha adoo keenaya qalab cusub ama ku daraya ficil cusub. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan sida aad uga caawin karto ilmahaaga inuu bilaabo ciyaarta.
Dooro ciyaar wanaagsan
Carruurta yar yar, waxaa ugu fiican in loo doorto ciyaaro fudud oo ay ku ciyaari karaan marar badan. Xullo ciyaar ay ka muuqdaan doorar cad oo ay kala leeyihiin adiga iyo ilmahaaguba. Tani waxay kuu fududeyn doontaa inaad si wada jir ah u wada ciyaartaan halkii aad si gooni ah ugu ciyaari laheyd. Markaad wada samaynaysssn xujooyinka sawirka, waxaad ilmahaaga u dhiibi kartaa inuu masuul ka noqdo sabuuradda halka adiguna aad ka masuul tahay qaybaha yaryar ee sawirka. Kaalintaadu markaa waa inaad u dhiibtaa cunuga, halka kaalintiisa / eedu ay tahay inaad qaybaha u dhigto meelaha saxda ah ee sabuuradda.
Isku day inaad raadiso ciyaar aad u maleyneyso inuu ilmahaagu ku raaxeysan doono. Haddii ilmahaagu si gaar ah u jecel yahay baabuurta, iskuday inaad raadiso ciyaar ay ku lug leeyihiin gawaarida carruurtu ku ciyaarto. Haddii ilmahaagu jecel yahay dhaqaaqa, ka fikir qaar ka mid ah orodka iyo boodboodka aad ku ciyaari karto bannaanka. Waxa ugu muhiimsan marka aad wada ciyaareysaan waa inaad had iyo jeer baashaashaan sidaa darteed waxaad dooneysaa inaad ciyaarta sii wadato iyo inaad waxyaabo kale isla sameysaan. Markaad ku ciyaareyso gawaarida caruurtu ku ciyaaraan, tusaale ahaan, waad qaban kartaa baabuurta oo dhan ka dibna waxaad u gudbin kartaa ilmahaaga si uu u dhigto garaashka.
Isu diyaari wakhtiga ciyaarta
Si loo hubiyo inaad si wada jir ah u wada ciyaareysaan ciyaarta, waxay ku caawin kartaa inaad wax walba horay u sii diyaarisid. Ka saar shey kasta oo aadan u adeegsan doonin ciyaarta oo ku mashquulin kara. Demi TV-ga oo iska dhig taleefankaaga casriga ah. Xulo meel ku habboon ciyaarta. Hal fikrad fiican ayaa ah in qalabka ciyaarahaaga lagu rido sanduuq ama boorso aad si fudud u soo qaadan karto markaad rabto inaad la ciyaarto ilmahaaga.
Markaad qorsheyneyso inaad ciyaar la ciyaarto ilmahaaga, waxaa muhiim ah inaad u caddeyso ilmahaaga waxa aad ka fikireyso inaad la ciyaarto. Hal dariiqo oo wanaagsan oo tan lagu sameeyo ayaa ah inaad ilmahaaga tusto "kaarka ciyaarta" - kaar ay ku qoran tahay sawirka ciyaarta aad rabto inaad ciyaarto. Tilmaamaha waxaa lagu daabacaa gadaasha kaarka si loo hubiyo in dhamaan dadka waaweyn ay yaqaanaan sida loo ciyaaro ciyaarta. Haddii aad tusto ilmahaaga kaarka ka hor intaadan bilaabin ciyaarta, isagu / iyadu waxay si dhakhso leh u baran doonaan waxa kaararka ciyaaruhu ka dhigan yihiin. Mar dambe, ilmahaagu wuxuu isticmaali karaa kaararka ciyaarta si uu u doorto ciyaaro kala duwan ama wuxuu weydiisan karaa inuu ciyaaro ciyaar ku siinaysa kaarka ciyaarta ee khuseeya.
Waxaad arki kartaa talo soo jeedinta ciyaaraha iyo kaararka ciyaarta ee u ekaan kara ciwaan hoosaadka ah “Maxaan la ciyaari karaa ilmahayga?”
Bar Ilmahaaga Ciyaarta
Carruurta yaryari waxay wax ku bartaan ku dayashada - iyagoo fiirinaya waxa dadka kale sameynayaan ka dibna isku dayayaan inay iyaga ka koobiyeystaan. Si ilmaha loo baro ciyaarta, kuwa qaan-gaarka ahi waa inay si cad u tusaan ilmaha waxa la sameynayo. Carruurtu waxay u baahan yihiin inay ciyaaraan ciyaaro marar badan, oo aad u badan si ay u bartaan. Tallaabooyinka qaarkood way ku adag tahay carruurtu inay bartaan, waxayna u baahan doonaan caawimaad laga helo qof weyn dhowrka jeer ee ugu horreeya. Haddii aad ilmahaaga la samaynayso xujo jigsaw ah, tusaale ahaan, waad ku caawin kartaa isaga / iyada adoo tilmaamaya meesha qaybaha kaladuwan u socdaan. Waxaa muhiim u ah carruurta inay la kulmaan guul haddii ay u maleynayaan in ciyaaruhu yihiin wax lagu farxo oo ay rabaan inay ciyaarta sii wataan.
Kaararka ciyaarta waxay dadka waaweyn ka caawin karaan inay carruurta baraan ciyaaro cusub ama ay horumariyaan kuwii hore. Kaararka ciyaarta waxaa ku yaal sawirro kuwaas oo adiga iyo ilmahaagaba kaa siin kara talo-bixinno waxa aad sameyn kartaan iyo waxaad oran kartaan inta ay ciyaartu socoto. Cinwaanka hoostiisa "Maxaan la ciyaari karaa ilmahayga?" waxaad ka heli doontaa talo soo jeedin ku saabsan sida kaararka ciyaarta u ekaan karaan, iyo sidoo kale fiidiyowyo muujinaya sida loo isticmaalo kaararka ciyaarta.
Qabso oo hayso dareenka ilmahaaga
Caruurta yar yar si fudud ayaa loo mashquuliyaa oo waxay lumiyaan diiradda. Si loo wada ciyaaro ciyaarta, sidaa darteed waa u muhiim qofka weyn inuu soo qabto oo uu hayo dareenka ilmaha. Hal dariiqo oo wanaagsan oo tan lagu sameyn karo ayaa ah in la isticmaalo dhaqdhaqaaqyo fara badan, muujinta wajiga iyo sawaxanka si loo soo jiito dareenka ilmahaaga. Ha ka baqin inaad buun buuniso!
Si loo ilaaliyo dareenka ilmaha, qaangaarka ah waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu la qabsado xawaaraha ciyaarta. Mararka qaarkood waa inaad waqti u qaadataa si aad uga caawiso ilmahaaga inuu tago. Waqtiyada kale, waxaa laga yaabaa inaad u deg degto si aad u hubiso in ilmahaagu aanu lumin diiradda.
Dhisida rajada ciyaarta ayaa ah qaab kale oo lagu soo jiito dareenka ilmahaaga. Hal dariiqo oo fudud oo tan lagu sameeyo ayaa ah in la tiriyo saddex ka hor intaan wax xiiso leh dhicin - tusaale ahaan, ka hor intaadan u oggolaan ilmahaaga inuu ku siibanto looxa, ama ka hor intaadan kor / aad isaga kor ugu qaadin hawada. Waxaad sidoo kale hakad gelin kartaa ciyaar si aad u abuurto dareen xamaasad leh. Haddii aad ilmahaaga ku riixeyso lulid, waad qaban kartaa lulida ka dibna si wanaagsan baad u riixi kartaa marka ilmahaagu uu adiga ku soo fiirinayo.
Baashaal marka aad ciyaareyso
Waxa ugu muhiimsan marka aad la ciyaareyso ilmahaaga waa in aad wada baashaaltaan. Tus ilmahaaga inaad u malaynayso inay tahay wax xiiso leh in wax la wada qabto. Waxa kale oo muhiim ah in la joojiyo ciyaarta ka hor inta aanu ilmahaagu daalin - waxa fiican in la ciyaaro dhawr ciyaarood oo gaagaaban oo aan ahayn mid dheer. Waxaad sidoo kale duubi kartaan naftiina oo ciyaareysa ka dibna aad tusi kartaa ilmahaaga fiidiyaha kadib. Sidaas, ilmahaagu wuxuu ugu raaxeysan karaa ciyaartaada madaddaalada ah marar badan!
Maxaan ilmahayga la ciyaari karaa?
Ciyaaraha ugu horeeya ee caruurta yaryari bartaan badanaa waa ciyaar bulsheed sida "peekaboo", fara-ka-ciyaar, ciyaar calaamado leh ama si fudud kor laguugu qaadayo. Kuwani waa ciyaaro aad ku ciyaari karto marar badan maalintii - miiska beddelashada, tusaale ahaan, ama inta aad baska sugeyso. Markay caruurtu waxyar sii weynaadaan, waxay had iyo jeer ku raaxaystaan ciyaaro fudud sida inay waxyaabo wax ku ridaan qasacadaha oo ay mar kale la soo baxaan, ama ay wax soo qaadaan.
Waa kuwan shanta kulan ee fiidiyowga ka muuqda, iyo sidoo kale kaararka ciyaarta ee kulamada.
Shan iyaaraha hore - kaararka ciyaarta (PDF oo daabacaadda ah)
Ciyaaraha leh xeerarka
Ciyaaraha leh xeerarku waa cad yihiin, ciyaaro fudud oo loo ciyaaro si isku mid ah markasta. Natiijo ahaan, carruur badan ayaa si dhakhso leh wax u baran kara ugana qayb geli kara ciyaarahan. Ciyaaraha leh xeerarka waa wax lagu farxo in lala ciyaaro hal cunug ama koox carruur ah.
Waa kuwan soo jeedinno ku saabsan shan kulan oo leh sharciyo.
Shan kulan oo leh sharciyo - kaararka ciyaarta (PDF oo daabacaadda ah)
Adiga oo isticmaalaya kaararka ciyaarta, waxaad si cad ugu muujineysaa carruurta ciyaarta aad rabto inaad ciyaarto. Kaararka ciyaarta ayaa sidoo kale ka caawin kara carruurta inay doortaan ama weydiistaan ciyaar gaar ah naftooda.
Heesuhu waa baashaal, ciyaaro fudud oo carruur badani jecel yihiin. Waa fikrad fiican in la doorto heesaha oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqyo si cad loo qeexay. Tani waxay u oggolaanaysaa carruurta inay ka qaybqaataan iyagoo samaynaya dhaqdhaqaaqyada, in kasta oo laga yaabo inayna heesin karin. Haddii cunuggaagu bartay sameynta buuqa ama erayada qaar dhaho, waad joojin kartaa heesta oo isaga / iyadu ha u buuxiyo booska.
Halkan waxaa ku yaal talo soo jeedin ku saabsan shan heesood oo aad ku bilaabi karto haddii aad rabto inaad bilawdo inaad isla heestaan cunuggaaga.
Shan heesood - kaararka heesta (PDF daabacaad ahaan)
Waxaad u isticmaali kartaa kaararka heesaha si aad uga caawiso ilmahaaga diyaarinta heesta aad qaadi doontid. Goor dambe, waxaad ka qaybgelin kartaa ilmahaaga xulashada heesta adoo u oggolaanaya inuu isaga / iyada shaandheeyo kaararka.
Ciyaaraha hal abuurka leh
Carruur badan ayaa jecel ciyaaraha hal abuurka leh ee ku lug leh rinjiyeynta, sawir qaadista, isku xirka xargaha iyo ku ciyaarista Play-Doh. Dadka waaweyni waxay u baahan yihiin inay tusaan carruurta waxa lagu sameeyo maaddada. Carruurta yaryari inta badan waxay jecel yihiin taxanaha aad ku soo celin karto marar badan. Tusaale ahaan, waad soo rogi kartaa "sausage" ee Play-Doh, googooyaa, googooyaa kubbado yaryar oo ku rid sanduuq shukulaato madhan. Si la mid ah cayaaraha oo dhan, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad wada baashaaltaan.
Hawlaha maalinlaha ah
Waxqabadyo badan oo maalinle ah ayaa bixiya fursado ku habboon in lala ciyaaro carruurta yaryar. Carruurtu inta badan waxay ku raaxaystaan inay sameeyaan “waxyaabo dhab ah” sida ay ugu ciyaaraan qalabka carruurtu ku ciyaaraan. Shaqooyin badan oo maalin kasta la qabto waxaa ka mid ah ficillo ay carruurtu ku raaxaystaan, sida "wax soo gelia oo haddan saar", "sii oo qaado", iyo kala-soocidda waxyaabaha.
U oggolow ilmahaagu inuu ka qayb qaato nashaadaadyada sida miiska la dhigayo, faaruqinta weelka saxanka, rakibaadda mashiinka dharka lagu dhaqo, masaxida alaabada lagu ciyaaro, masaxida miiska, qashinka debeda loo soo saarayo iyo in wax laguu helo.
Ciyaaraha doorka iyo ciyaaraha khiyaaliga ah
Markay carruurtu gaaraan laba sano, inta badan waxay bilaabaan inay ciyaaraan ciyaaro khayaali ah oo fudud sida quudinta xayawaanka boombalada ah ama ku ciyaarista baabuurta ciyaarta. Adiga oo qaangaar ah, waxaad ka caawin kartaa ilmahaaga inuu horumariyo cayaarahiisa / keeda adoo ku daraya boobmalo cusub ama inaad la timaado ficil cusub oo lagu daro ciyaarta. Haddii aad ku ciyaareyso gawaarida boombalada ah, tusaale ahaan, waxaad ku sawiri kartaa meelaha gawaarida la dhigto sabuurad, ama waxaad iska dhigeysaa inaad u socoto dukaanka dayactirka si baabuurta loo hagaajiyo. Haddii aad ku ciyaareyso xayawaanka boombalada iyo caruusadaha, waxaad iska dhigi kartaa inaad xaflad u sameyneyso qaar ka mid ah caruusadaha. Mararka qaar way adkaan kartaa in lala yimaado wax la ciyaaro. Kaarka ciyaarta ayaa kaa caawin kara adiga iyo ilmahaaguba inaad ka fikirtaan waxyaabo kala duwan oo ciyaarta lagu sameeyo. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa sawirada inay kaa caawiyaan inaad si xariir badan u wada xiriirto inta ciyaarta socoto. Qaangaar ahaan, waa inaad ka taxaddartaa inaad si gaar ah ugu caddayso waxaad leedahay iyo waxaad sameyneyso adoo tilmaamaya sawirrada. Ilmahaagu wuxuu kaloo tilmaami karaa sawirrada si uu faallo uga bixiyo oo uu isagu / naftiisa naftiisa u qaado.
Halkan waxaa ah shan talo soo jeedin ah oo ku saabsan sida kaararka cayaaraha ee ciyaaraha kala duwan u ekaan karaan:
Ku ciyaar gawaarida boombalada- kaarka ciyaarta (PDF daabacaadda).
Ku ciyaar boombalada xayawaanada - kaarka ciyaarta (PDF daabacaadda).
Ku ciyaar caruusadaha / boombalada ciyaaraya - kaarka ciyaarta (PDF daabacaadda).
Goobta ciyaarta - kaarka ciyaarta (PDF daabacaadda).
Ku ciyaar kubad-ciyaar-kubbadeed (PDF daabacaad).
Ku ciyaar boombalada xayawaanada
Ku ciyaar gawaarida boombalada
Muxuu ilmahaygu u ciyaari la’yahay?
Waxaa jiri kara sababo dhowr ah oo canuggu uusan weli u bilaabin ciyaarta:
Ilmuha way ku adag tahay inuu fiiro gaar ah u yeesho kuwa kale. Carruurtu waxay ku bartaan ciyaarta iyagoo ku dayanaya. Waxay daawadaan kuwa kale oo sameynaya ka dibna isku dayaya inay koobiyeyaan. Haddii cunugga ay ku adag tahay inuu fiiro gaar ah u yeesho waxa dadka kale sameynayaan, isagana / iyadu way ku adkaan doontaa inuu ku daydo oo uu bilaabo inuu ciyaaro.
Ilmuhu ma yaqaaniin waxa lagu sameeyo alaabada lagu ciyaaro ama ma fahmayo ciyaarta.
Ilmuhu wuxuu leeyahay waqti gaaban oo feejignaan ah waxayna ku adag tahay inuu sii wado howlaha.
Ilmuhu kuma dhiirri geliyo inuu waxyaabo cusub isku dayo. Carruurta qaar ayaa "ku dhegi kara" ciyaaro ama qalab gaar ah oo ay ku adag tahay inay ku ciyaaraan wax aysan aqoonsan ama aysan sameyn karin.
Haddii ilmahaaga ay ku adag tahay inuu bilaabo inuu ciyaaro kaligiis / eeda, waxaa si gaara muhiim ugu ah inaad, sida qof weyn, aad u caawiso ilmahaaga. Haddii aad ka welwelsan tahay koritaanka ilmahaaga, la xiriir xarunta daryeelka ilmaha ee deegaankaaga (barnavårdscentral, BVC).
Ka caawi ilmahaaga inuu bilaabo inuu ciyaaro (pdf).﻿